Dagaal Xalay ka Dhacay Gaarisa oo Dad ku Dhinteen – Rasaasa News
Nov 25, 2011 Dagaal Xalay Gaarisa ka Dhacay oo Dad ku Dhinteen
Garrisa, November 25, 2011 [ras] − Lix ruux ayaa ku dhimatay, 17 ruuxna way ku dhaawacmeen qaraxyo iyo rasaas xalay ka dhacay magaalada Gaarisa ee gabalka waqooyiga bari dalka Kenya, qaraxyadaas oo sababay in xalay ay Gaarisa noqota magaalo mugdi ah oo dagaal ka socdo.
Dhamaan dadka wax ku noqday weerarradaas bambaano iyo rasaasta waxay ahaayeen shacab ku sugnaa meelo ay dadku isugu yimaadaan oo ku yaala badhtamaha magaalada, waxayna ahaayeen qaraxyadii ugu khasaaraha badnaa ee ka dhaca Gaarisa.
Saddex ruux ayaa isla markiiba ku dhintay isla goobta, halka saddex ruuxa oo kalena ay ku dhinteen isbitaalka, waxaana mid ka mid ah qaraxyada uu ka dhacay meel ku dhow Kaniisad ku taala madhtanka Gaarisa.
Dadka ku nool Gaarisa waxay sheegeen in qaraxyada ka hor ay maqleen dhawaaq rasaaseed, ka dibna uu dhacay qaraxii hore, daqiiqado ka ddibna ay maqleen qarax labaad oo xoog badan.
Ciidamada booliiska Gaarisa ayaa waxay bilaabeen isla xalay in ay qab qabtaan dad badan oo loo aanaynayo in ay ka ku lug lahaayeen weerarradaas, in kasta oo ayna wali jirin cid sheegatay mas’uuliyada.
Waxay hadana ciidanka amaanka Kenya dirba ku eedaynayaan ururka Al shabaab, oo ay dagaalo ciidamada Kenya ku dhex marayaan gudaha dalka Somaliya. Shabaabkuse wali ma beenin mana sheegan qaraxa Gaaris gilgilay.
Shalay galabtii ayaa 3 ka mid ah ciidamada Kenya ee ku jira dalka Somaliya lagu dilay qarax gaadhi ay saaraayeen oo haleelay. Tirada ciidama ka dhintay Kenya tan iyo intii ay galeen Somaliya ayaa gaadhaya 8 askari.
Tan iyo kolkii ay ciidamada Kenya galeen Somaliya waxaa Kenya ka dhacay qaraxyo badan, in kasta oo heegan la galiyey dalka hadana ciidamada amaanka Kenya waxba way ka qaban kari la,a yihiin qaraxyada ka socda dalka.